Tsimparifary - Wikipedia
Ny tsimparifary dia karazan' ahitra izay matetika miara-maniry amin' ny vary. Misy karazany maro ireo ahitra ataon' ny Malagasy hoe "tsimparifary", dia ireo atao amin' ny anarana ara-tsiansa hoe Echinochloa sy Panicum sy Sacciolepis ary Zizania izay samy ao amin' ny fianakavian-javamaniry Poaceae.
Ireto ny anarana ahalalana azy ireo amin' ny teny malagasy: ahibary, ahibava, ahidrano, ahilava, famoa, fantaka, farimanga, karanga, osaosa, sarivary, songolo, tsimparifarifotsy, tsimparifarimanga, tsimparifarimanja, tsimparifarimena, tsimparifary, tsiparifary, veromena, verotsanga.
2 Ireo zavamaniry atao amin' ny teny malagasy hoe tsimparifary
2.1 Ny tsimparifary Echinochloa
2.2 Ny tsimparifary Panicum
2.3 Ny tsimparifary Sacciolepis
2.4 Ny tsimparifary Zizania
3.2 Tsimparifary ao amin' ny Baiboly
Araka ny hevitr' i Ottino, ny teny hoe tsimparifary dia avy amin' ny teny dravidiana ilazana ny vary sy ny momba azy, izay niavian' ny teny maaniany any Bôrneô hoe parei, ny teny javaney hoe pari, ny teny daiàka hoe parey ary ny teny bisaia any Filipina hoe palaï. Ny teny hoe tsimparifary izany dia midika hoe "sahala amin' ny vary". Tsy avy amin' ny teny malagasy hoe fary izany io teny io.
Ireo zavamaniry atao amin' ny teny malagasy hoe tsimparifaryHanova
Ny tsimparifary EchinochloaHanova
Amin' ireo faritra manana toetanin-jana-pahin-tany sy antonony mafana no misy azy. Misy karazany 30 hatramin' ny 40 ny tsimparifary. Maniry isan-taona na mandavan-taona, arakaraka ny karazany, ny tsimparifary. Mitsangana na miondika ny fanirin' ny tahony izay mety mahatratra 3,6 m.
Ireto ny karazana misy eto Madagasikara:
Echinochloa stagnina (Retz.) P. Beauv. (Poaceae) (atao amin' ny teny malagasy hoe ahibary, ahidrano, farimanga, karanga, tsimparifarimanga, tsimparifarimena, ary tsimparifary);
Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. Poaceae) (atao amin' ny teny malagasy hoe ahibary, ahidrano, karanga, osaosa, tsimparifarifotsy, ary tsimparifary);
Echinochloa pyramidalis (Lam.) Hitchc. & Chase (Poaceae) (atao amin' ny teny malagasy hoe ahibava, ahidrano, ahilava, karanga, sarivary, songolo, tsimparifarimanja, ary tsimparifary).
Ny tsimparifary PanicumHanova
Ny Panicum dia zavamaniry ao amin' ny fianakavian' ny Poaceae, izay ahitana karazana miisa 370 maniry amin' ny faritra manana toetany antonony na toetanin-jana-pehin-tany na ambanin-jana-pahin-tany. Mety manitry isan-taona na mandavan-taona izy, eo anelanelan' ny 20 hatramin' ny 400 sm ny haavony. Volena ho fihinam-boa na ho hanin' ny biby ny karazany sasany. Ny maro aminy dia ahi-dratsy ho an' ny fambolena.
Iry no karazana fantatra indrindra eto Madagasikara:
Panicum maximum Jacq. (Poaceae) (atao amin' ny teny malagasy hoe famoa, fantaka, tsimparefare, tsimparifary, tsiparefare, veromena, ary verotsanga);
Ny tsimparifary SacciolepisHanova
Ny Sacciolepis dia zavamaniry ao amin' ny fianakavian' ny Poaceae, maniry amin' ny faritra manana toetanin-jana-pehin-tany sy toetany antonony mafana, indrindra aty Afrika. Misy karazana miisa 25 izy ireo. Ny karazany fantatra indrindra amin' ny teny malagasy hoe tsimparifary na tsiparifary, dia ny Sacciolepis africana C.E.
Ny tsimparifary ZizaniaHanova
Ny Zizania dia ahitra ao amin' ny fianakavian' ny Poaceae izay fahita any Amerika Avaratra sy any Azia Atsinanana. Maniry an-drano ny Zizania, maniry isan-taona na mandavan-taona. Mahatratra 1 hatramin' ny 3 m ny haavony. Ao amin' ny Baiboly amin' ny teny malagasy izy dia nadika hoe tsimparifary io teny io, ao amin' ny lahatsoratra misy fanoharana ny amin' ny mpamafy korontana sy fisamatsamahana.
"Na hikambana sy hiray ka hivady aza isika,
Tsy hataon' ny olona toy ny tsimparifary sy ny ketsa,
ka mifankatia vao sarahiny?"
Tsimparifary ao amin' ny BaibolyHanova
Ao amin' ny Evanjely araka an' i Matio (Mat 13.24-30) dia misy fanoharana momba ny ahi-dratsy iray izay nadika amin' ny teny malagasy ao amin' ny Baiboly amin' ny teny malagasy hoe tsimparifary koa. Ny teny grika hoe zizanion , izay manindro ny ahitra atao amin' ny anarana ara-tsiansa hoe Zizania (fa tsy ny Echinochloa na ny Panicum na ny Sacciolepis) no nadika toy izany.
Izao ilay lahatsoratra:
24 Ary nanao fanoharana hafa koa taminy Izy ka nanao hoe: Ny fanjakan' ny lanitra dia tahaka ny lehilahy anankiray izay namafy voa tsara tany an-tanimbariny; 25 fa raha natory ny olona, dia avy ny fahavalony ka namafy voan-tsimparifary teny amin' ny vary, dia lasa nandeha. 26 Ary rehefa naniry ny vary ka niteraka dia niposaka koa ny tsimparifary. 27 Dia avy ny mpanompon-dralehilahy ka nanao taminy hoe: Tompoko, tsy voa tsara va no nafafinao tany an-tanimbarinao? koa avy taiza kosa ny tsimparifary? Dia hoy izy taminy: 28 Fahavalo no nanao izany. Ary ny mpanompony nanao taminy hoe: Koa tianao va handehananay hanongotra sy hanangona azy 29 Fa hoy izy: Tsia, fandrao, raha manongotra ny tsimparifary ianareo, dia hongotanareo miaraka aminy koa ny vary. 30 Aoka ihany hiara-maniry izy roroa ambara-pihavin' ny fararano; ary amin' ny fararano dia holazaiko amin' ny mpijinja hoe: Angony aloha ny tsimparifary, ka ataovy amboarany mba hodorana; fa ny vary dia taomy ho any an-tsompitro. (Mat 13.24-30, Ny Baiboly)
↑ Paul Ottino, in Annuaire de Pays de l'Océan Indien 2 : 105, 1977, Aix-en-Provence,
↑ "Fa raha natory ny olona, dia avy ny fahavalony ka namafy voan-tsimparifary teny amin' ny vary, dia lasa nandeha", Mat 13.25, Ny Baiboly
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Tsimparifary&oldid=1038885"
Dernière modification le 13 Oktobra 2021, à 11:44
Voaova farany tamin'ny 13 Oktobra 2021 amin'ny 11:44 ity pejy ity.